1. IKrisimesi, ixesha elimnandi lokuphela konyaka xa ubusika obubandayo bungena. Namhlanje sinemenyu yokutya. Oko kuyakongeza ukonwaba, ulonwabo kunye nobushushu kusapho esiluthandayo. Uyakwazi ukuthambisa ubumnandi kunye nosapho lonke Ukwenza imeko entle kunye neenkumbulo, kunye nokwenza lula ukwenza, incasa emnandi kunye nokulula ukulungiselela izixhobo. Ihlala ifumaneka kwiivenkile ezinendlela yokutsha yetshokholethi eshushu, kodwa izithako ezilula kodwa ezimnandi • Itshokholethi (Emnyama, Ubisi) i-200 g • I-Marchmello 100 g • Ubisi olutsha (lokusela xa usela) 1 indebe sele ilungile, masihambe kunye neebhombu zetshokholethi ezishushu.
2. Yinyibilike itshokholethi kubushushu obuncinci emathunjini kwaye kufuneka yaphulwe okanye isikwe ibe ngamaqhekeza amancinci ukuze inyibilike lula.
3. Lungisa umngundo we-silicone, gcoba ibhotolo engagalelwanga ityuwa okanye ioyile yomnquma, uthele itshokholethi ebilisiweyo ngaphezulu kwesikhunta. Beka efrijini malunga nemizuzu eli-10 ukuvumela itshokholethi ukuba ipholile ibe ziityhubhu kwaye imile ngokungqinelana nesikhethileyo. Ihlala isetyenziswa njengokushicilelwa kwesetyhula. Kuba unokubeka iglasi kwaye ubone isangqa esihle esirhangqi
4. Xa itshokholethi ikwimo Unwrap kunye nefriji. Emva koko thabatha isikhunta, usule uze ungeze i-tshokoleta uze uqhubeke de imali yanele.
5. Xa itshokholethi iqina Kwaye ufumane inani elonelisayo Beka i-marshmallow phakathi. Emva koko sandwich itshokolethi ephezulu neyasezantsi Vala umjikelo wesahlulo kunye nayo yonke itshokholethi. Yenza umfanekiso omile kakuhle Kwaye uyibeke kwisikhenkcisi kwakhona, kulula kwaye okona kubaluleke kakhulu, abantwana bayayithanda kwaye bayonwabele imisebenzi abayenzayo nosapho, ewe, indlela ebalulekileyo yokwenza iibhombu zetshokholethi ezishushu zilula, nabani na angayenza, kodwa inkqubo ayikapheli. Makhe sijonge indlela yokuyitya ukongeza ubumnandi kunye nokushushubeza ngeli xesha leKrisimesi nonyaka omtsha.
6. Ungazitya njani iibhombu zetshokholethi ezishushu
7. Lungisa imagi entle enkulu kuneebhotile zetshokholethi esizilungisileyo. Ukuba ufumane umoya weKrisimesi Zama ukukhetha okuluhlaza okotshani, obomvu oqaqambileyo, okanye iglasi enophawu lomnyhadala. Emva koko ubilise ubisi olutsha kubushushu obuphantsi, uxhokonxe de ubisi luqale enyangeni kwaye umsi ofudumeleyo uyadada, ugalele ubisi olushushu kwiglasi yeebhombu zetshokholethi Ubisi olushushu luza kunyibilikisa itshokholethi ngokuthe ngcembe kwaye liza kunuka xa usela. Ubisi olumnandi oluxutywe kunye nencasa emnandi yetshokholethi. Xa usitya icephe IMarshmallows iya kubonisa incasa emnandi. Kwaye incasa ethambileyo ehlafunayo Inika imvakalelo efudumeleyo kwigama ngalinye
8. Ezona zipho zibalaseleyo luthando, ukufudumala, kunye nobukho bosapho. Yonwaba kunye kunye kunye eholideyini Ukwenza iinkumbulo ezinuka kamnandi Uyenza njani i-chocolate eshushu Ukwenza amaxesha okonwaba abhalwe ixesha elide kangangoko kunokwenzeka